नेपाली सेनाको २० करोडको ज्याकेट टेन्डरमा धाँधली ? ब्ल्याकलिस्टेट मुन्काको दौडधुप – Etajakhabar
काठमाडौं। नेपाली सेनाको सम्भार रथी विभागलाई सेनाका अधिकृतहरुले कमाउ अड्डाको रुपमा लिने गर्दछन। यो अड्डाको प्रमुख उपरथी, सहायक प्रमुख सहायक रथी र स्वदेश र विदेशका दुई गरी दुइ शाखामा कर्नेलहरुले नेतृत्व गरेका हुन्छन। स्वदेश र विदेशको वार्षिक खरिद अर्ब रुपैंयाको हुन्छ। यो सम्भाररथी विभागको प्रमुख बन्ने अवसर प्रधानसेनापति निकटका विश्वासिलो उपरथी (जर्नेल)ले मात्र पाउछन्। हाल यस विभागको प्रमुख बन्ने अवसर उपरथी दीपक भारतीले पाएका छन्।
सैन्य स्रोतका अनुसार, ५२ हजार थान आर्मी अफिसियल ज्याकेटको मूल्य लगभग रु. १८/२० करोड पर्ने र त्यसका लागि अहिले केही सप्लायर्सहरु सेटिंगका लागि जर्नेल, कर्नेल र ‘रानी’ सा’बहरुकोमा सोर्सफोर्स लगाउन दौडधुप गर्ने गरेको थाहा भएको छ। यसरी सेटिंग मिलाउन दौडधुप गर्ने सप्लायर्सहरुमा दुई नम्बरी काम गर्ने ठेकेदार पिताम्बर मुनका र श्रवण अग्रवाल रहेको थाहा भएको छ।
स्रोतका अनुसार, नेपाल प्रहरीले कालोसूचीमा राखेका ठेकेदार पिताम्बर मुनकाले अहिले नेपाली सेनाको रु. १८/२० करोड टेन्डर सेटिंगमा हात पार्न वार्गेनिङ्ग गर्दै नमुना ज्याकेट बोकेर सेनाका जर्नेल दीपक भारती, कर्नेल निरन्जन बस्नेतको अफिस र घरमा धाउने गरेको थाहा भएको छ । स्रोत भन्छ, खरिद गरिने ज्याकेटको स्पेसिफिकेशन समेत गोलमाल गरेर टेन्डर सेटिंगको तयारी भैरहेको छ ।
स्रोतका अनुसार, सेटिंगका सप्लायर्स बाहेक यो ५२ हजार ज्याकेटको ठेक्कामा अन्य सप्लायर्सले प्रतिस्पर्धा गर्नबाट बन्चित गरिएको छ। यो टेण्डरमा धाँधली गरिएको कुराको पुष्टि कसरी हुन्छ भने, टेण्डरको बाँकी अवधि १५ दिन मात्र छ। अब पन्ध्र दिनमा ज्याकेटको सिलाई गरेर गुणस्तर रिपोर्ट समेत तयार पारी छोटो समयमा कर्नेल निरन्जन बस्नेतले तयारी गरेको सेटिंगका सप्लायर्स बाहेक अन्यले कसरी प्रतिस्पर्धा गर्छन ? यसको जवाफ उपरथी दीपक भारतीले दिनु पर्छ कि पर्दैन ? सम्भारको यस्तो खुल्ला धाँधली प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीलाई थाहा हुन्छ कि हुँदैन ?साँघु साप्ताहिकमा खबर छ ।
प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीज्यू !
प्रकाशित मिति: शनिबार, पौष २९, २०७४ समय: ८:४८:१३